Bestlọ akwụkwọ ahịa UK kacha mma n'ịntanetị maka ndị mbido - Mụta 2 Trade March 2021
Mụọ 2 Ahịa 2021 Ntuziaka Na Ahịa Ntanetị!
Nwee mmasị na ahịa ego? Ọ bụrụ otu a, ị nwere ike ịdị na-achọ ka gị na ebe ahia ịntanetị dị. You're nọghị sọ gị, dịka nde ndị ahịa mkpọsa na gburugburu ụwa na-azụ ma na-ere akụ na ịpị bọtịnụ - ma na oge ma oge zuru oke.
Na na kwuru, online trading adịghị dị mfe dị ka imeghe a ore na akaụntụ na-akpata ego. Kama nke ahụ, ọ dị mkpa ka ị ghọta nke ọma otu ụlọ ọrụ si arụ ọrụ.
Ọmụmaatụ, ị na-achọ taa ahia ego dị ka GBP / USD na EUR / USD, ma ọ bụ ị nwere mmasị karịa n'ịzụ ma na-ere ahịa na-acha anụnụ anụnụ? Kedu ụzọ ọ bụla, enwere ọtụtụ ihe ị ga-amụta!
Nke a bụ ihe mere anyị ji atụ aro ka anyị gụọ Mụta 2 Trade 2021 Ntuziaka na Trading Online. N'ime ime nke a, ị ga - enye onwe gị ohere kacha mma iji nwee ihe ịga nke ọma na oghere ịzụ ahịa mkpọsa.
Mara: Ka anyị na-ekpuchi ntuziaka anyị, ọ dị oke mkpa na ị ghọtara etu iwu nkwụsị na-arụ ọrụ mgbe ị na-ere ahịa n'ịntanetị. Nke a ga - ahụ na ị nwere ike iwelata ihe egwu azụmaahịa gị na ogologo oge.
Gịnị bụ ahia Onlinentanetị?
Na nkenke, ahia ntanetị bụ usoro ịzụ na ire akụ na ebumnuche ị nweta ego. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị zụrụ B 1,000 bara uru nke BT, wee ree ha ụbọchị ise ka e mesịrị na uru nke 10%, nke a ga-anọchite anya azụmaahịa na-aga nke ọma. Na nke ahụ kwuru, anaghị echekwa azụmaahịa dị n'ịntanetị dị nnọọ maka ọdịnala ọdịnala na mbak. Kama nke ahụ, ịnwere ike ịzụta, ree ma zụọ ọtụtụ puku akụrụngwa ego site na nkasi obi nke ụlọ gị.
Nke a gụnyere ihe niile sitere na agbụ, indices, commodities, ETFs, na ọbụna ego dijitalụ dị ka Bitcoin. Ebumnuche dị oke mkpa, ebumnuche kachasị mkpa bụ na ị nwere ike ịzụta ma ọ bụ ree akụrụngwa na ọnụahịa dị mma karịa ka ị kwụrụ. Y’oburu n’ichoo ime nke a, i gha erite uru. Iji nyere gị aka ịlele otu ụzọ ahịa ndị ahụ ga-aga, ị ga-eji ọrụ ntanetị na / ma ọ bụ nyocha akụkọ. Ọ bụrụ na ịmeghị, ị nwere ike ịtụgharị mkpụrụ ego ma nwee olileanya maka ihe kacha mma.
Iji nwee ike ịzụ ahịa n'ịntanetị, ịkwesịrị iji onye na-ere ahịa. E nwere ọtụtụ narị ndị na-ere ahịa n'ịntanetị na-arụ ọrụ na mbara igwe, ọtụtụ n'ime ha na-arụ ọrụ maka ndị ahịa. Dịka ọmụmaatụ, ị ga-enwe ike imepe akaụntụ na nkeji, ma were ego debit / kaadị akwụmụgwọ, e-obere akpa, ma ọ bụ akaụntụ akụ. Ozugbo edobere gị niile, ị nwere ike zụta ma ree ihe ndị ị họọrọ na pịa bọtịnụ. Nwere ike ime nke a site na desktọọpụ desktọọpụ, mbadamba, ma ọ bụ ekwentị mkpanaaka.
N'adịghị ka pọtụfoliyo ọdịnala ọdịnala - ebe ndị na-etinye ego na-anọdụ ala na ngwaahịa maka ọtụtụ afọ, azụmaahịa n'ịntanetị na-arụkarị n'oge dị mkpirikpi. Nke a na-ekpuchi ụbọchị trading -nke na-ahụ ka ndị na-etinye ego na-ejigide akụnụba ọtụtụ awa, ma ọ bụ ọbụna nkeji. Mgbe ahụ ị nwere ndị ọkacha mmasị na-azụ ahịa, nke na-ahụkarị ndị na-etinye ego na-emeghe ọnọdụ maka ọtụtụ ụbọchị ma ọ bụ izu.
Uru na ọghọm nke Onlinezụ ahịa Ntanetị
Ahia ahia site na nkasi obi nke ulo gi
Ndị na-ere ahịa na ntanetị na-akwado ọtụtụ puku akụrụngwa ego
Ike ịkọ nkọ ma akụrụngwa ahụ ga-arịgo ma ọ bụ gbadaa na uru
Nkwụnye ego na kaadị debit / kaadị, e-obere akpa ma ọ bụ akaụntụ akụ
A ghaghị ịhazi usoro ntanetị maka ịntanetị
Gwọ na isslọrụ dịzi nnukwu
Ghọta Trazụ ahịa N'ịntanetị - Ihe Ndị Bụ Isi
Enwere ọtụtụ ihe ị ga-amụta banyere ins na out of how how online trading works, so ọ kachasị mma ka anyị duzie gị n'usoro nzọụkwụ site na ntinye. Nke a na-amalite na mbido, dịka ị ga-ahọrọ ịhọrọ usoro azụmaahịa n'ịntanetị nke kacha egbo mkpa gị.
✔️Họrọ Platform Trading Online
Ebe mbido ụgbọ mmiri mbụ gị ga-abụ ịchọta onye na-ere ahịa. E kwuwerị, nke a bụ naanị ụzọ ị ga - esi nwee ike ịzụta ma ree akụ na ntanetị. Metric kachasị dị mkpa nke ị kwesịrị ịchọpụta bụ n'ihe banyere ọnọdụ nhazi usoro ikpo okwu. N'ụzọ dị oke mkpa, ọ bụrụ na onye na-ere ahia anaghị ejide ikikere-otu - zere ya.
Bodiesdị ndị na-enye ikikere nke ịchọrọ ilebara anya bụ ụdị nke FCA (UK), ASIC (Australia), CySEC (Cyprus), na MAS (Singapore). N'ime nke a, ego itinye ego gị ga-anọ na nchekwa n'oge niile.
Ozugbo i guzobere usoro iwu nke onye na-ere ahịa, ịkwesịrị ilele usoro ndị ọzọ - dịka ndị edepụtara n'okpuru.
Nke ruru eru: Needkwesịrị ịlele ma onye na-ere ahịa na-anabata ndị ahịa si obodo gị.
Nkwụ ụgwọ: Ndi ore ahia a akwado usoro ugwo gi? Nhọrọ ndị a ma ama gụnyere akwụmụgwọ / kaadị kredit, e-obere akpa, ma ọ bụ nnyefe ego.
Gwọ na isslọrụ: Lelee ịhụ ihe ụgwọ na isslọrụ na ore ebubo. Nke a na-adịkarị iche dabere na ụdị akaụntụ ị mepere.
Na-agbasa: Chọpụta otu esi asọmpi usoro ịre ahịa n'ịntanetị dị na ngalaba mgbasa. Na tighter na mgbasa, nke ka mma.
Ngwa ngwa tradable: Ọ dị oke mkpa iji chọpụta ụdị ngwa ahịa onye na-ere ahịa na-akwado. Ebe ahia kachasị mma n'ịntanetị na-enyekarị ọtụtụ puku ahịa.
Nkwado Ndị Ahịa: Lelee iji hụ ihe ọwa nkwado ndị ahịa na-enye site na saịtị ahịa. Nke a kwesịrị ịgụnye nkata ndụ, email, na nkwado ekwentị.
Echegbula onwe gị, anyị na-enyocha usoro ndị dị n'elu na nkọwa zuru ezu na ntuziaka anyị.
✔️Ikpebi Akụ A Ga-ere
Dị ka anyị kwuru na nkenke n'elu, usoro ntanetị kachasị n'ịntanetị ga-enye gị ohere ịnweta ọtụtụ puku ahịa. Ọ bụghị naanị na nke a hụ na ị nwere ike ịzụ ahịa ọkacha mmasị gị akụrụngwa, mana ọ na - enye gị ohere ịmepụta pọtụfoliyo dị iche iche dị iche iche.
Iji nye gị echiche banyere ọtụtụ akụ ị nwere ike ịzụ ahịa n'ịntanetị, lelee ndepụta dị n'okpuru:
Ihe ndozi: Ebe a na-ere ahịa n'ịntanetị na-enyekarị gị ohere ịnweta ọtụtụ puku acha anụnụ anụnụ. Ma ọ dịkarịa ala, nke a kwesịrị ịgụnye isi ahịa nke London Stock Exchange (LSE), New York Stock Exchange (NYSE), na NASDAQ.
Indices Ahịa: Ọ bụrụ n ’ị na-achọ ịre ahịa na ahịa sara mbara, Indices na-enye gị ohere ịzụta ọtụtụ narị mbak site na otu azụmahịa. Nke a gụnyere S&P 500, Dow Jones, na FTSE 100.
Ngwaahịa: Ngwongwo ahia nke ahia bu ahia nke otutu ijeri dolla nke aka ya. Nke a gụnyere ike dị ka mmanụ na gas, ọla siri ike dịka ọla edo, yana ngwaahịa ngwaahịa dịka ọka na ọka.
ETFs: ETF (ego gbanwere ego) nọ n'ọnọdụ iji soro akụ, ma ọ bụ otu akụ - ha na-enye gị ohere ịzụ ahịa n'ahịa na-enweghị nnweta kpọmkwem. Nke a gụnyere ihe niile sitere na ịre ụlọ, igbo wii na iwu, ego na ụgbọelu.
Forex: Oghere mgbanwe ego ofesi - ma ọ bụ naanị 'Forex', bụ usoro ịzụrụ na ire ego. Echiche bụ ịkọwapụta ụzọ otu ụzọ ego ga - esi gaa n'ahịa - dịka GBP / USD ma ọ bụ AUD / NZD.
Ego: Ọ bụrụ n'inwe agụụ dịtụ elu karịa maka ihe egwu, usoro ntanetị n'ịntanetị ugbu a na-enye gị ohere ịkọ nkọ banyere ọdịnihu nke cryptocurrencies dị ka Bitcoin. Can nwere ike ime nke a megide USD ma ọ bụ zụọ ahịa abụọ crypto-to-crypto ozugbo (dị ka BTC / ETH).
Ndepụta dị n'elu adịghị agwụ ike site na mgbatị ọ bụla nke iche n'echiche. Dị ka ihe atụ, ị nwekwara ike ịzụ nkekọ, ọmụrụ nwa, ego gọọmentị, na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akụ ọ bụla bara uru!
Ndghọta ahia iwu
Mgbe ị na-esonye na saịtị azụmaahịa dị n'ịntanetị, a ga-achọ ka ị ghọta nke ọma etu usoro iwu si arụ ọrụ. Nke a bụ n'ihi na ị ga - azụ ahịa na ntọala Mee N'onwe Gị, nke pụtara na ịkwesịrị ime ka onye na-ere ahịa mara ihe ọ bụ ị na-achọ ime. Ka emechara, online ndị na-ere ahịa Forex na-anabata ndị ahịa si UK agaghị, ma enweghị ike, nye gị ndụmọdụ banyere ụdị azụmaahịa a. Kama, ikwesiri iji aka gị chọpụta nke a.
Dị ka ndị dị otú a, n'okpuru anyị na-atụle ụfọdụ iwu kachasị mkpa ị ga-achọ itinye mgbe ị na-ere ahịa n'ịntanetị.
Nke mbu, ikwesiri ikpebi uzo ị chere na akụrụngwa a na-ekwu ga-aga ahịa. Nke a bụ n'ihi na n'adịghị ka onye ahịa azụmaahịa ọdịnala, ị ga-enwe nhọrọ nke ịga 'ogologo' ma ọ bụ 'mkpụmkpụ'. Maka ndị na-amaghị, ịga ogologo oge na akụ pụtara na ị chere na ọnụahịa ya ga-aba dịkwuo. Ọ bụrụ na nke a bụ ikpe, ịkwesịrị itinye 'ịzụta iwu'.
Ọ bụrụ na i chere na ihe onwunwe ahụ ga-aga ala na uru, mgbe ahụ ị ga-aga mkpụmkpụ. Dị ka ndị dị otú a, ị ga-achọ itinye 'ire ere'. Ọ bụrụ na-eji a mgbasa ịkụ nzọ ore ahia ahia na ntanetị, mgbe ahụ a na-akpọ iwu dị ka 'iwu dị ogologo' ma ọ bụ 'ree ahịa'.
Ozugbo ị kpebisiri ike ma ị na-eme atụmatụ ogologo ma ọ bụ mkpụmkpụ nke ihe onwunwe ahụ, ị ​​kwesịrị iche echiche banyere ọnụahịa ntinye gị. N'echiche a, ị nwere nhọrọ abụọ - usoro ahịa ma ọ bụ njedebe oke.
Nhọrọ otu bụ usoro ahịa. Nke a pụtara na ị chọrọ idowe gị zụọ ma ọ bụ na-ere iji na ọzọ dị price. Iji maa atụ, ka anyị kwuo na ịchọrọ ịga ogologo oge na osisi Tesco.
Ọ bụrụ na ọnụahịa ahịa dị ugbu a bụ 235.59p, usoro ahịa nwere ike ime azụmahịa gị na 235.61p. N'otu aka ahụ, enwere ike itinye ya na 235.57p. Kedu ụzọ ọ bụla, ọ ga-adị na gburugburu ọnụahịa ahịa ugbu a.
Iwu iwu na-enye gị mgbanwe nke ịhọrọ ọnụahịa ntinye. Nhọrọ a na-amasị ndị ahịa oge, n'ihi na ọ na-enye gị ohere ịbanye n'ahịa na ọnụahịa dị mma karị ma si otú a - belata mgbasa. Iji maa atụ, ka anyị kwuo na ịchọrọ itinye iwu ịzụta na ebuka Tesco, mana ị chọghị ịkwụ ụgwọ ahịa ahịa ugbu a nke 235.59p.
Kama, ịchọrọ ịbanye n'ahịa na ọnụahịa dị mma karị - kwuo 0.5% n'okpuru ọnụahịa dị ugbu a. Ka o siri dị, ị na-etinye iwu ịgba na 234.41p. Ọ bụrụ na mgbe ahịa ahịa nke osisi Tesco na-akụ na ọnụ ọgụgụ ahụ, a ga-egbu azụmahịa gị. N'ezie, ọ nweghị nkwa na a ga-ezute ọnụahịa ntinye gị. Ọ bụrụ na ọ bụghị, iwu ịgba gị ga-arụ ọrụ ruo mgbe ị ga-akagbu ya.
Dịka anyị kwuburu na mbụ, ọ dị mkpa ka ị ghọta etu iwu ịkwụsị ụgwọ si arụ ọrụ. N'ime ime nke a, ị ga - enwe ike izere ịme nnukwu mbibi mgbe ị na - azụ ahịa n'ịntanetị. Kama nke ahụ, ịnwere ike 'ịgba' ego ị ga-efufu site n'itinye ihe nkwụsịtụ nke ezi uche dị na ya.
Iji maa atụ, ka anyị rapara n’ahịa Tesco anyị tụlere na ngalaba dị n’elu. Kpebiri itinye usoro ahịa ogologo oge, a na-egbu azụmahịa gị na 253.60p. Agbanyeghị na ị kwenyesiri ike na ọnụahịa nke osisi Tesco ga-abawanye na ụbọchị na izu ndị na-abịanụ, ị chọghị ida karịa 10% nke osisi gị.
Yabụ, dabere na ọnụego ntinye gị nke 253.60p, a ga-achọ ka ị wụnye usoro nkwụsị nkwụsị gị na 228.24p. Nke a pụtara na ọ bụ ọnụ ahịa osisi Tesco ka ọ gbadaa na 228.24p - usoro nkwụsị ịkwụsị gị ga-emechi azụmaahịa ahụ na mfu 10%.
Akwụkwọ ikike Kwụsị-Loss enyere n'iwu
Iwu nkwụsị na-efu dị ukwuu maka mbenata ihe egwu gị, mana ha anaghị ekwe nkwa 100%. Site na nke a, anyị na-ekwu na na ọnọdụ ahịa ahịa na-agbanwe agbanwe, iwu gị nwere ike ọ gaghị adaba na ụzọ ala. Ọ bụrụ na nke a bụ eziokwu, azụmahịa gị nọ n'ihe ize ndụ nke ịmefu nnukwu mfu.
Dị ka ndị dị otú a, ọ nwere ike ịba uru ịtụle iwu 'ịkwụsị' ọnwụ. Site na ịkwụ ụgwọ dịtụ elu na azụmaahịa gị, onye na-ere ahịa ga - ahụ na ị na - asọpụrụ iwu nkwụsị gị.
Were Iwu Uru
Iwu ikpeazu nke ikwesiri ighota dika onye ahia ohuru na ntaneti bu nke iji nweta ego. Nke a na-arụ ọrụ n'otu ụzọ ahụ akọwapụtara na mbụ ka ọ ghara ịla n'iyi mana ọ tụgharịrị.
Dịka ọmụmaatụ, ebe ị tinyelarị iwu nkwụsị gị iji mebie mfu gị na 10%, ị nwere ike ịpụ na azụmaahịa gị mgbe ebuka Tesco mụbara site na 20%.
Na ọnụahịa ntinye nke 235.60p, a ga-etinye 20% iji nweta uru na 282.72p. Ọ bụrụ na ọnụahịa ahụ zutere, azụmahịa gị ga-emechi na-akpaghị aka.
Otu n'ime usoro kachasị mkpa iji lelee anya mgbe ị na-ahọrọ saịtị ịzụ ahịa n'ịntanetị bụ ego ole a ga-ebo gị. Dị ọnụahịa nwere ike ịdị iche n'ọhịa na ebe nrụọrụ weebụ na-ere ahịa, yabụ kpachara anya iji nyochaa ngalaba dị n'okpuru gbasara mgbasa na azụmaahịa azụmaahịa.
Na imirikiti nke ikpe, gị họọrọ online ore ahia ga-ana mgbasa. Nke a bụ nnoo ọdịiche dị n'etiti nzụta na ire ọnụahịa nke ihe onwunwe. Mgbasa ahụ na-etinye gị na ọghọm ozugbo mgbe ị na-azụ ahịa, ebe ọ bụ na ịchọrọ ịme ihe dị iche iji mebie ọbụna. Dị ka ndị dị otú a, ala mgbasa ahụ, ọ ga-akara gị mma dị ka onye na-azụ ahịa.
Gbalị ịchọta isi gị gbasara mgbasa ahụ nwere ike ịme mgbagwoju anya na mbụ, ya mere lelee ihe atụ na-esonụ.
Want chọrọ ịzụ mmanụ
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịga ogologo oge, ọnụahịa izu ya bụ $ 24.00
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịga obere, ọnụahịa ire ya bụ $ 23.60
Ihe dị iche n’etiti ọnụ ahịa abụọ a bụ 1.69%
Nke a pụtara na ịkwesịrị ịme opekata mpe 1.69% na azụmaahịa gị imebi
Ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na ị tinyere iwu ịzụta na mmanụ na $ 24.00. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịhapụ ọnọdụ gị, ị ga - enwe ike ịme ya na $ 23.60 - dịka nke a bụ ọnụahịa ire ere ugbu a.
Naanị mgbe ọnụahịa ire ere na-abawanye site na 1.69% na $ 24.00, ị ga-agbaji, ebe nke a bụ ọnụahịa ị banyere n'ahịa.
A na-ebo ndị ọrụ azụmaahịa ebubo azụmaahịa mgbe ịzụrụ na ree ihe bara uru. Nke a na-agbakọkarị dị ka pasent, nke a na-abawanye site nha ahia gị.
Iji maa atụ, ka anyị kwuo na ị zụrụ ego £ 4,000 nke British American Tobacco ebuka. Ọ bụrụ na ndị na-ere ebubo ebubo ọrụ nke 1%, mgbe ahụ ị ga-akwụ £ 40.
N'ọnọdụ ndị ọzọ, onye na-ere ahia nwere ike ịkwụ ụgwọ ego efu. Iji maa atụ, ịnwere ike ịkwụ £ 10 maka ihe ọ bụla zụrụ na ire ahịa - agbanyeghị ego ole ị na-azụ.
Ozi ọma ahụ bụ na ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-arụ ọrụ na ntinye ego n'ịntanetị na-enye gị ohere ịzụ ahịa na enweghị ọrụ ọrụ. Nke a pụtara na ị ga-achọ ikpuchi mgbasa.
Zụ ahịa site na itinye ego
Ọnụ ọgụgụ buru ibu nke usoro ntanetị n'ịntanetị ga-enye gị ohere ịzụta ma ree akụ na leverage. Nke a ga - enyere gị aka ime ka ụdị azụmahịa gị bawanye. Dịka ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na ị na-etinye ihe ngosi nke 5x na usoro £ 500. N'ime ime nke a, uru ahịa gị bụ ,2,500 500 - n'agbanyeghị na ị nwere £ XNUMX na akaụntụ ahịa gị.
N'otu aka, itinye itinye ego n'ọrụ nwere ike ime ka uru gị bawanye uru mgbe ahịa na-amasị gị. Ha bara uru mgbe ịchọrọ ịzụ ahịa, mana ị nweghị ezigbo njikwa akaụntụ. Agbanyeghị, ịzụ ahịa na ntinye ego dịkwa oke egwu, ebe ị nwere ike tufuo oke ọrụ gị.
Ọ bụrụ n’ikpebie ịzụ ahia na itinye ego, a ga-achọ itinye ‘oke’. Nke a dị ka itinye nchekwa na mgbazinye ego, ọ bụrụhaala na ọ bụrụ n ’ịkwụghachi n’ ịkwụghachi, nbinye ego ahụ ga - edebe ego ahụ. N'ihe banyere itinye ego, oke nke oke gị na-egosi otu ị ga - esi mee ka azụmahịa gị bawanye uru. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na itinye ntinye nke 20x, na oke gị bụ £ 200 - ị na-azụ ahịa na ,4,000 XNUMX.
Agbanyeghị, nke a pụtakwara na ị ga-atụfu oke £ 200 gị ma ọ bụrụ na azụmaahịa ahụ mebiri ya. Nke a ga - eme ma ọ bụrụ na ahịa ga - emegide gị site na otu ego. Dịka ọmụmaatụ, dịka oke a 200 na £ 4,000 pụtara 5%, mgbe ahụ 5% na-agbagọ n'ụzọ na-ezighi ezi ga-ahụ ka onye na-ere ahịa mechie azụmahịa gị na akpaghị aka, ma debe oke.
Nanị ụzọ ị ga-esi zere nke a bụ:
Wụnye nkwụsị nkwụsị nke ọma karịa / n'okpuru ọnụahịa mmiri mmiri, ma ọ bụ
Tinyekwuo ego na oke oke gị
Ọ bụrụ na ị kpebie ịzụ ahịa n'ịntanetị n'emeghị nnyocha, ị nwekwara ike ịgba chaa chaa na ụlọ ịgba chaa chaa. Ka o siri dị, ọ dị oke mkpa ka ị mụta otu esi enyocha akụ - ma na teknụzụ na isi ngalaba.
Nyocha teknụzụ na-ezo aka na usoro nke eserese ọgụgụ. Karịsịa, ị ga-enyocha usoro eserese akụkọ ihe mere eme, na-ebu amụma nke ụzọ ụzọ akụ ga-esi ga. N'eziokwu, ọ nwere ike were ọtụtụ ọnwa tupu ị malite iji nweta ntụsara ahụ na nyocha teknụzụ, mana ọ dị oke mkpa.
Iji nyere gị aka n'ụzọ, ị ga-achọ iji ọrụaka egosi. Ndị a bụ ngwaọrụ ndị na-agbasi mbọ ike ịtụle usoro dị mkpa nke akụnụba - dị ka volatility, mpịakọta ahịa, echiche ahịa, yana akara nkwado / nkwụsi ike.
Ihe ngosi di egwu nke ndi n’azu ahia na ntanetị tinyere:
Onye oscillator Stochastic
Ebugharị ntụgharị ntụgharị (MACD)
Ọkara ndekpọ ntụzịaka
Njirimara ike dị elu (RSI)
Fibonacci retracement.Ichimoku igwe ojii
Y’oburu na ibu onye ahia ohuru ma odighi ike idozi isi gi na ihe nyocha nke eserese, o nwere ike bara uru iji ihe oru Muta ahia ahia 2. Anyị na-enye ma n'efu na Ọrụ ntanetị nke na-eme ka ị mara na oge mgbe ihe ngosi ntanetị achọpụtala ohere ịzụ ahịa na-abịanụ.
Nwere ike iji nke a na njikọ na nyocha nyocha, nke anyị na-atụle n'okpuru.
Nnyocha bụ isi
Ọ bụ ezie na nyocha ọrụ aka na-agba mbọ inyocha usoro ọnụahịa akụkọ ihe mere eme, nchọpụta bụ isi na-eleba anya na akụkọ ụwa. Karịsịa, echiche a bụ ịtụle otu mmepe akụkọ nwere ike isi metụta ọnụ ahịa ọdịnihu.
Iji maa atụ, ka anyị were ọrịa Coronavirus na-efe efe na 2020. Na imerime ụgbọ elu ndị gbadara gburugburu ụwa - ndị na - azụ ahịa nọkwa na mkpọchi - ịchọrọ mmanụ enweghị ihe ọ bụla.
Kedu ihe na - eme ma ọ bụrụ na ọchịchọ maka ihe onwunwe dara? Ọnụahịa ya na-agbaso otu. Dị ka ndị dị otú a, onye nwere ezi uche ga-enyocha ihe omume ụwa na-eme ụbọchị niile, ma tinye ahia ya.
Ofdị Usoro Ntanetị Onlinentanetị
Yabụ ugbu a ị matara ihe ndị bụ isi n'ịzụ ahịa n'ịntanetị, ị kwesịrị ugbu a iche echiche banyere ụdị trading azum na ịchọrọ iji ọrụ. Nke a nwere ike kewaa n'etiti ụzọ atọ - nke dabere n'otú ị siri zụọ ahịa.
Dị ka aha ahụ na-egosi, ndị ahịa ụbọchị anaghị adịkarị jigide ọnọdụ emeghe maka ihe karịrị otu ụbọchị. Kama nke ahụ, ndị ahịa ga-azụta ma ọ bụ ree otu ngwongwo ma wepụ ya n'ehihie.
Ọnọdụ ahụ nwere ike ịdị na-emeghe maka ọtụtụ awa, ma ọ bụ ọbụna nkeji - dabere na ajụjụ a na-ajụ ahịa. Ndị ahịa ụbọchị na-etinye ọtụtụ ahịa kwa ụbọchị ma na-agbasi mbọ ike inweta obere uru.
Zụ ahịa swing dịtụ iche na azụmaahịa ụbọchị, ebe ọ na-ahụkarị ka ndị na-etinye ego na-emeghe oghere maka ọtụtụ ụbọchị izu. Dịka ọmụmaatụ, onye ahịa nwere ike itinye iwu ịzụta na Apple na nzaghachi maka akụkọ nkwụnye ego ka mma karịa.
Onye ahia ahụ ga-ele anya ịnụ ụtọ oge dị mkpirikpi, wee pụọ na azụmaahịa ahụ mgbe ọ pụtara na omume ahụ amalitela ịnwụ.
Ogologo oge ahia
Ogologo oge ahia ga-ahụ ndị na-etinye ego na-ejigide akụ ahụ maka ọtụtụ ọnwa ma ọ bụ afọ. Nke a na-adabara ndị na-etinye ego na-enweghị atụ na-achọ inweta uru na-agbanwe agbanwe, ogologo oge.
Iji maa atụ, ị nwere ike ikpebi ịzụta shares 5,000 ruru BP mbak wee ree ha afọ anọ ka e mesịrị na (olile anya) ọnụahịa dị elu. N'ime usoro a, ị ga-enwetakwa ego ị ga-enweta n'ụdị nke ọnwa atọ.
Otu esi amalite ahia ugbua
Ọ bụrụ na ị gụọla ntuziaka anyị ruo ugbu a, ị kwesịrị ịmara ugbu a etu ọrụ azụmaahịa n'ịntanetị si arụ ọrụ. Ọ bụrụ otu a - ị dịkwala njikere ịmalite azụmaahịa ugbu a -N'okpuru ebe a ka anyị depụtara usoro ntụpụ-aka dị mfe iji nyere gị aka ịmalite.
Kwụpụ 1: Chọta Ebe Azụmaahịa N'ịntanetị
Ga-ebu ụzọ chọta ebe ntanetị ịntanetị na-ezute ihe mgbaru ọsọ gị ogologo oge. Ekwesịrị ịhazi onye na-ere ahịa na ajụjụ ma weta nnukwu ngwongwo.
Ọ kwesịkwara ịnye ntanye ma gbasaa ọrụ, ma nye gị ohere ịkwụnye ma wepụ ego na mfe.
Ọ bụrụ na ịnweghị oge iji chọta saịtị azụmaahịa dị n'ịntanetị n'onwe gị, ị ga-ahụ ndị ahịa ise kachasị elu edepụtara na ala nke ibe a.
Nzọụkwụ 2: Mepee Akaụntụ ma Nyochaa njirimara
Niile saịtị ntanetị n'ịntanetị chọrọ ka ị mepee akaụntụ. Ya mere, ị ga-achọ ịnye ụfọdụ ozi nkeonwe.
Nke a gụnyere gị:
Ikwesiri inyocha njirimara gị. Imirikiti ebe nrụọrụ weebụ na-ere ahịa na-enye gị ohere ime nke a site na ibudata otu akwụkwọ ikike ngafe ma ọ bụ akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala.
Ga ugbu a mkpa iji kwụọ ụgwọ gị online trading akaụntụ.
Paymentzọ ịkwụ ụgwọ a na-akwadokarị gụnyere:
Ikwesiri ịlele ihe nkwụnye ego kacha nta dị, yana ma usoro ịkwụ ụgwọ gị ọ na-adọta ụgwọ ọ bụla.
Nzọụkwụ 4: Nye iwu
Ozugbo a kwadoro akaụntụ azụmaahịa gị n'ịntanetị, ịnwere ike itinye azụmaahịa mbụ gị. Iji mee ka bọl na-agagharị, na-agagharị site na ọtụtụ ngwa ego nke onye na-ere ahịa na-akwado.
Ọ bụrụ n’inwere ihe dị mkpa n’uche, chọọ ya. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụ ahịa Apple, banye 'Apple' n'ime igbe ọchụchọ wee pịa nsonaazụ kwekọrọ.
Ozugbo ị nọ na peeji nke azụmahịa maka ihe ị họọrọ, ị ga-etinye iwu.
Zụta / Ree: Họrọ si a Buy (ogologo) ma ọ bụ na-ere (obere) iji
Ọdụ: Tinye ego ịchọrọ ịzụ ahịa
Ahịa / Iwu Iwu: Họrọ usoro ahịa ma ọ bụrụ na ịchọrọ iwere ọnụahịa dịnụ dịnụ. Họrọ maka usoro ịgba ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka ahia gị banye na ọnụahịa a kapịrị ọnụ.
leverage: Ọ bụrụ na ị chọrọ itinye leverage, họrọ gị otutu
Nkwụsị-Ọnwụ: Debe iwu nkwụsị ka ị belata oke ọghọm gị
Were Uru: Debe iwu iji nweta-ego iji mechie uru ị bara
Ozugbo ị kwadoro iwu ahụ, a ga-egbu ya n'ime sekọnd ole na ole. Y’oburu n’acho iweputa oke, nka gha aghaghi rue mgbe iwebata onu ahia gi.
Ebe ahia ahia kacha mma nke 2021 - Top 5 Picks anyị
Na-achọ ụfọdụ nduzi na saịtị azụmaahịa dị n'ịntanetị iji? Ọ bụrụ otu a, ị ga - ahụ nchịkọta ise kacha elu nke 2021 edepụtara n’okpuru. A na-ahazi ndụmọdụ anyị niile, na-enye mgbasa na ọrụ dị ala, ma na-enye gị ohere itinye ego na kaadị debit / kaadị akwụmụgwọ.
1. eToro - Ebe ahia ahia kacha mma maka ndị na-amalite
Ndị ASIC, CySEC, na FCA na-achịkwa, eToro bụ onye na-ere ahịa n'ịntanetị nke na-akwado ọtụtụ puku akụ. Nke a gụnyere ebuka, cryptocurrencies, ETFs, indices, na ngwaahịa. Na-etinye ego na oke nke ụzọ ịkwụ ụgwọ. Naanị ezigbo Crypto dị na US.
Site n'ịgụ nduzi miri emi anyị zuru ezu, anyị nwere olile anya na ị nwere ihe ị ga - eme iji nwee ihe ịga nke ọma n'ahịa ahia n'ịntanetị. N'ikwu eziokwu, ọ ga-ewe ọtụtụ ọnwa tupu ị nwee ike ịzụta na ire akụ n'ụzọ nkasi obi, yabụ kpachara anya itinye oge dị ka o kwere mee na njem mmụta.
Na na kwuru, ọ bụrụ na ị na-eche na ị dị njikere iji nweta gị online trading ọrụ underway, niile nke anyị na-atụ aro nyiwe-ekwe ka ị na-amalite na nkeji. Naanị ị ga-emepe akaụntụ, debe ego, ọ bụkwa ya - ị nwere ike ịmalite ịzụ ahịa ozugbo!
Kedu akụ ị nwere ike ịzụ ahịa n'ịntanetị?
Imirikiti ebe a na-ere ahịa n'ịntanetị na-akwado ọtụtụ puku akụ. Nke a gụnyere ihe niile sitere na ebuka, ETF, agbụ, indices, ọla edo, mmanụ, na mkpuchi.
Kedu ka ụlọ ọrụ azụmaahịa si arụ ọrụ?
A na-ebo ebubo ụlọ ọrụ azụmaahịa dịka pasent nke ego ị na-azụ. Iji maa atụ, ọ bụrụ n’ịzụ ahịa $ 10,000 n’ọnwa ahụ, ma kọmitii ahụ kwụ na 1%, ị ga-akwụ $ 100.
Gịnị bụ leverage na ntanetị n'ịntanetị?
Leverage na-enye gị ohere ịzụ ahịa karịa ihe ị nwere na akaụntụ gị. Ọ bụ ezie na nke a nwere ike ịkọba uru gị, ọ nwere ike ime otu ihe ahụ maka mfu gị.
A na-achịkwa ahia n'ịntanetị?
Ee, ebe ahia dị ka FCA na ASIC ga-achịkwa saịtị ntanetị n'ịntanetị. Na nke ahụ kwuru, ụfọdụ ndị na-azụ ahịa amaara na ha na-arụ ọrụ na-enweghị ikikere, yabụ kpachara anya lelee nke a tupu ịdebanye aha.
Kedu ka m ga-esi gbakọọ mgbasa na ntanetị n'ịntanetị?
A na-eji usoro dị iche iche dabere na klas akụ. Dịka ọmụmaatụ, mgbe Forex na-agbasa mgbasa na 'pips', gbasaa nyiwe ịkụ nzọ na-adabere na 'isi'. Dị ka ndị dị otú a, ụzọ kachasị mfe iji gbakọọ ya bụ ịrụpụta ọdịiche pasent dị n'etiti ọnụahịa ịzụta na ire.
Kedu usoro ịkwụ ụgwọ m nwere ike iji na saịtị azụmahịa n'ịntanetị?
Paymentzọ ịkwụ ụgwọ a na-akwadokarị gụnyere debit / kaadị akwụmụgwọ, e-wallets, na waya banki ..
Kedu usoro ahịa?
Site na itinye usoro ahịa (ma ọ bụghị iwu njedebe), a ga-egbu ahịa gị na ọnụahịa dịnụ dịnụ.